Myanmar Kason Font 1.0 APK Download - Android Tools Apps
APK Downloader Apps Tools Myanmar Kason Font 1.0
Myanmar Kason Font 1.0 APK
Myanmar Font Styles
"Myanmar Kason Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Kason ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။
MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။
Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။
Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)
Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarKason(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာ
Myanmar Kason Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :D
မရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarKasonFont ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။
မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီး
Kason.itz သို့မဟုတ် Kason.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။
Theme တွေထဲမှာ Myanmar Kason Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက Fontထဲမှာ
Myanmar Kason Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။
Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။
Play Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Kason+Font
"Myanmar Kason" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!
you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)
if you have any problem with this app, please contant me fromemailor facebook.
App Information Myanmar Kason Font
Myanmar Kason Font
Myanmar Font Styles Show More...
Myanmar Warso Font 1.0 APK
"Myanmar Warso Font" Root မလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်MyanmarWarsoဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung,Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRootမလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2MB တည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူ Rootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version 6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo,Xiaomi, Vivo မဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့ Root လိုအပ်ပါတယ်။Rootနဲ့သွင်းရင်တော့ Coc, Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browserမှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OK သွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Commentပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံးOne Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး Install လုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး Myanmar Warso(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefault ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)" ကိုနှိပ်ပြီး ThemeတွေထဲမှာMyanmar Warso Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ:Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarWarso Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Managerထဲကိုသွားပြီ Vivo Myanmar Font ဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးWarso.itzသို့မဟုတ် Warso.txj ကိုဖွင့်ပြီး Applyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)"ကိုနှိပ်ပြီး Default ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့"ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပါ။Themeတွေထဲမှာ Myanmar Warso Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီး Applyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefault ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ်Theme ထဲက Font ထဲမှာMyanmar Warso Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApply လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး Defaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Root ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင်Grant သို့ Allow ပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းက Restartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Okပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarWarsoFontPlay Storeကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများ ဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ် > DownloadFree at : http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Warso+Font"MyanmarWarso" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support AllAndroid Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI) without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow6.0 Need Root)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++without root!Other phone requires root permission!if you have anyproblem with this app, please contant me.
Myanmar Exam Result 2017 1.0 APK
၂၀၁၇ ခုနှစ်​တက္ကသိုလ်​ဝင်​စာ​မေးပွဲမြန်​မာတစ်​နိုင်​ငံလုံးရလဒ်​ကိုတစ်​ထိုင်​တည်းထိုင်​ကြည့်​လို့ရနိုင်​မယ့်​အက်ပလီကေးရှင်းလေးပါ။​​အောင်​စရင်းထွက်​တဲ့ ၁၇ ရက်​​နေ့ နံနက်​ ၆ နာရီခွဲမှာ​အောင်​စရင်းရလဒ်​အစုံကို ဒီ Application ထဲကတိုက်​ရိုက်​ကြည့်ရူ့နိုင်​မှာပါ။​ကျောင်းကို တိုက်​ရိုက်​သွားစရာမလိုပဲ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး​ဆော့ဝဲလ်​ထဲကနေကြည့်လို့ရပါတယ်။အဆင်​လဲ​ပြေအချိန်​ကုန်​လဲ သက်​သာ ပြီးတစ်​နိုင်​ငံလုံးကိုကြည့်​​နေနိုင်​တဲ့ အတွက်​အဆင်​​ပြေလိမ့်​မယ်​လို့​မျော်​လင့်​မိပါတယ်​ ;)Developed By Min Min(Yng IT)
Myanmar Tagu Font 1.0 APK
"Myanmar Tagu Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Tagu ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarTagu(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar Tagu Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarTaguFont ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးTagu.itz သို့မဟုတ် Tagu.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Tagu Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Tagu Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarTaguFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Tagu+Font
Myanmar Thadingyut Font 1.0 APK
"Myanmar Thadingyut Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Thadingyut ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ကနေဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarThadingyut(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar Thadingyut Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ:Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာMyanmarThadingyut Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးThadingyut.itz သို့မဟုတ် Thadingyut.txj ကိုဖွင့်ပြီးApplyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Thadingyut Font ဆိုတဲ့ ThemeကိုရွေးပြီးApply ပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Thadingyut Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarThadingyutFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Thadingyut+Font"Myanmar Thadingyut" Font is Beautiful Myanmar ZawgyiFontStyle!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
"Myanmar Kason Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Kason ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarKason(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar Kason Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarKasonFont ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးKason.itz သို့မဟုတ် Kason.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Kason Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Kason Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarKasonFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Kason+Font"Myanmar Kason" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me fromemailor facebook.
Myanmar Nattaw Font 1.0 APK
"Myanmar nattaw Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Nattaw ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarNattaw(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar nattaw Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာMyanmarNattaw Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးnattaw.itz သို့မဟုတ် nattaw.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Nattaw Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Nattaw Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarNattawFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Nattaw+Font"Myanmar Nattaw" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
Myanmar Tabodwe Font 1.0 APK
"Myanmar tabodwe Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Tabodwe ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarTabodwe(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar tabodwe Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာMyanmarTabodwe Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးtabodwe.itz သို့မဟုတ် tabodwe.txj ကိုဖွင့်ပြီးApplyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Tabodwe Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Tabodwe Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarTabodweFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Tabodwe+Font"Myanmar Tabodwe" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi FontStyle!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
Zawgyi Myanmar Font Changer 1.1 APK
100 Phoe3Khu Apps
Android ဖုန်းများRootမလိုအပ်ပဲမြန်မာစာထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။Facebook နှင့်ဖုန်းအတွင်းရှိMessageများလည်းမြန်မာစာဖတ်ရူ့နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီ App တစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MB ကျော်လေးပဲရှိပါတယ်။COC တို့ Smule တို့မှာလည်းမြန်မာစာဖတ်ချင်ရင်တော့ဖုန်းကိုRootလုပ်ထားမယ်ဆိုဒီကောင်လေးနဲ့လည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။Samsung ဖုန်းတွေ Android Version 2.3 ကနေ 6.0 အထိRootမလိုပဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။6.0 ကျော်သွားရင်တော့ Root လိုအပ်ပါတယ်။Oppo ဖုန်းတွေအားလုံး Root မလိုပဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။Xiaomi(MIUI) ဖုန်းတွေအားလုံး MIUI Version 8.0 ကျော်တွေမှာလည်းRootမလိုDesigner အကောင့်မလိုပဲမြန်မာစာထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။Vivo ဖုန်းတွေအားလုံးလည်း Root မလိုအပ်ပါ၊Huawei ဖုန်းတွေလည်းRootမလိုပဲအားလုံးမြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။အခြားဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ Root လိုပါမယ်။App ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲပေးထားပါတယ်။ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ဖုန်းကိုရွေးချယ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။အခြားဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ Other(#Root) နဲ့ထည့်သွင်းရမှာပါ။PlayStoreကနေဒေါင်းဖို့အဆင်မပြေသူများအောက်ပါလင့်ကနေဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာပါ>>http://www.takhon.com/tech/?s=Zawgyi+Myanmar+Font+Changer<<အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး Myanmar(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပါ။မရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarFontကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးMyanmar.itz သို့မဟုတ် Myanmar.txj ကိုဖွင့်ပြီးApplyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#ZawgyiMyanmarFontChanger
Myanmar TawThaLin Font 1.0 APK
"Myanmar TawThaLin Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar TawThaLin ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ကနေဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarTawThaLin(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar TawThaLin Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာMyanmarTawThaLin Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးTawThaLin.itz သို့မဟုတ် TawThaLin.txj ကိုဖွင့်ပြီးApplyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar TawThaLin Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar TawThaLin Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarTawThaLinFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+TawThaLin+Font"Myanmar TawThaLin" Font is Beautiful Myanmar ZawgyiFontStyle!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
"Myanmar Kason Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Kason ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarKason(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar Kason Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarKasonFont ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးKason.itz သို့မဟုတ် Kason.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Kason Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Kason Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarKasonFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Kason+Font"Myanmar Kason" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
Myanmar WarGaung Font 1.0 APK
"Myanmar WarGaung Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar WarGaung ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarWarGaung(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar WarGaung Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာMyanmarWarGaung Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးWarGaung.itz သို့မဟုတ် WarGaung.txj ကိုဖွင့်ပြီးApplyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar WarGaung Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar WarGaung Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarWarGaungFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+WarGaung+Font"Myanmar WarGaung" Font is Beautiful Myanmar ZawgyiFontStyle!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
Myanmar Font စာလုံးလှ 1.4 APK
Android ဖုန်းများစွာကိုမြန်မာဇော်ဂျီဖောင့်နှင့် စာလုံးလှဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ💯အသုံးပြုနည်း( ၁ ) ပထမဦးစွာ Smart Font All နေရာကို နှိပ်ပြီးမိမိနှစ်သက်ရာစာလုံးလှနံပါတ်ကို နှိပ်ပြီး Install လုပ်ပါ Openမပေါ်သောကြောင့် Doneကိုနှိပ်ပါ။( ၂ ) Font Style နေရာမှာတော့ စာလုံးလှဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။( ၃ ) ပြီးလျှင် Change Font ကိုနှိပ်ပါ Select Fontဆိုပြီးပေါ်လာရင်မိမိ Install လုပ်ထားတဲ့ စာလုံးလှဖောင့်ကို ရွေးပြီးYes ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ 💯
Myanmar Font Changer 1.1 APK
Androidဖုန်းအားလုံးမြန်မာစာအဆင်ပြေစွာထည့်သွင်းပေးနိုင်တဲ့ FontChangerလေးပါ။Android 2.0 အထက်ကနေ 7.0 အထိထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ် ;)Huawei, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi တို့လို Font Styleသို့မဟုတ်Theme ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာRoot မလိုပဲမြန်မာစာထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 3MB ပဲရှိပါတယ် :)ဖုန်း System အတွင်းပိုင်းအထိ မြန်မာစာထည့်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းကRootဖောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။Root ရှိရင်တော့မည်သည့်ဖုန်းမဆို ဖုန်းSystemတစ်ခုလုံးမြန်မာစာမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။Coc, Web Browser, Smule နဲ့အခြားAppတွေအားလုံးမြန်မာစာမှန်ကန်စေမှာပါ :)Root ဖောက်ဖို့ကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Model ဗားရှင်းအလိုက်Googleမှာရှာဖွေပြီးဖောက်ထားနှင့်လိုက်ပါ ;)အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို Install ကိုနှိပ်ပြီး Install လုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီး Myanmar(iFont) ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ Install ကိုနှိပ်ပြီး Change Font1 ကိုနှိပ်ပါ။မရရင် Change Font2 ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ MyanmarကိုရွေးပြီးApply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးMyanmar.itz သို့မဟုတ် Myanmar.txj ကိုဖွင့်ပြီးApplyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ Install ကိုနှိပ်ပြီး Change Fontကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ Install ကိုနှိပ်ပြီး Change Fontကိုနှိပ်ပြီးMyanmar ဆိုတဲ့Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်All Android(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် Install ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Restoreကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ်:Dအားလုံးအဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ :D
Myanmar Fb Font 1.5 APK
ဖေ့ဘုတ်မှာ မြန်မာစာမမှန်တဲ့ ဖုန်းတွေကိုမြန်မာစာအမှန်မြင်ရ ဖတ်ရအောင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။